Imoto encinci yasekhaya sele ithengisiwe e-Austria, eIreland naseNew Zealand | Ndisuka mac
Okokugqibela nasemva kokubhengezwa ngu-Apple kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani yaseCupertino ikhuphe i-HomePod mini eIreland, eOstriya naseNew Zealand ngentseni yayizolo ngoLwesibini we-15 kaJuni.
Alithandabuzeki elokuba eyona nto inomdla malunga nale MiniPod mini siseti enikezelwa kumsebenzisi weApple phakathi komgangatho wesandi, ukuhambelana kunye nexabiso. Kwaye esi sixhobo sidlula ekubeni sisithethi esilula esinoyilo oluhle, kuba sinika ithuba lokuba ngumncedisi ogqibeleleyo ekhaya Enkosi ngokuhambelana neKhayaKit kunye nomncedisi weSiri.
I-HomePod mini encinci yasungulwa ngokusesikweni ngo-Okthobha u-2020 kumazwe aliqela, phakathi kwawo sibalaselisa iSpain, i-United States, i-Australia, i-Canada, i-France, i-Jamani, i-Hong Kong, i-India, i-Japan kunye ne-United Kingdom. ICupertino Inkampani ibhengeze ukuba kule nyanga izakuphehlelela amanye amazwe kwaye ngoku ifikelela e-Austria, New Zealand nase-Ireland.
Xa iApple yasungula iKhayaPod abasebenzisi abaninzi babelindele ukufika kwemodeli encinci ngexabiso eliphantsi kakhulu kwaye ekugqibeleni inkampani yaseCupertino yasungula le MiniPod mini. Isithethi esinomdla ngenene ngexabiso kunye nobungakanani kodwa Ngokusengqiqweni ayinakuthelekiswa nesandi kunye nomntakwabo omdala. Umgangatho wesandi ulungile, kodwa khange ndikwazi ukuthelekisa i-HomePod yoqobo. Ngayiphi na imeko, kukuthenga okuhle kakhulu ukuba ufuna ukuba noSiri ekhaya kwaye ufuna ukumamela iApple Music yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Imoto encinci yasekhaya sele ithengisiwe e-Austria, eIreland naseNew Zealand
Siphantse sabona i-ceramic Apple Watch Series 5 emnyama